गन्धान हेजी - Blogs of Sagar Prasai
कोरियामा हुँदा एकदिन हामी बसमा सियोल शहरबाट करीव दुई घण्टा टाढा रहेको अर्कै शहरमा जाँदै थियौं । बसको अगाडीको सिटमा एकजना केटी बसिरहेकी थिईन्। उनको अगाडी व्हिलचियर थियो। म पनि मेरो व्हिलचियरबाट उनको छेउको सिटमा सरेँ। उनले अलिकति भित्ता तिर सरेर मलाई ठाउँ दिईन्। मैले उनलाई धन्यवाद भने। उनले पनि हाँसेर टाउको हल्लाईन्।
बस गुडेको एकछिन सम्म त हामी दुवै बोलेनौँ। केहिबेर पछि उनले आफ्नो व्यागबाट चकलेट झिकिन्। त्यो बेला मैले देखेँ उनको हात पनि राम्रो गरी चल्दैन रहेछ। उनलाई त्यो चकलेट झिक्न पनि निकै अफ्ट्यारो भयो। चकलेट झिकेर एउटा आफुले खाईन् र अर्को मलाई देखाएर भनिन-"खान्छौ?"
उनको अँग्रेजी एभरेज कोरियनको भन्दा प्रस्ट थियो। मैले हुन्छ भने र चकलेट लिएँ। अनि मैले नै कुरा सुरू गर्दै भने- "मेरो नाम सागर हो। नेपालबाट आएको।"
उनले भनिन्- "मेरो नाम हेजी। नाईस टु मिट यू।"
त्यसपछि बल्ल उनको र मेरो कुराकानी सुरू भयो। हेजीलाई ६ वर्ष अगाडी मेरूदण्डमा लाग्ने एउटा रोगले च्यापेर शरीरका केहि भागहरू काम नगर्ने भएको रहेछ। त्यो बेला उनी बिहे गरीवरी अष्ट्रिलियामा पढ्न गएकी रहिछिन्। र केहि पनि लक्षणहरू सुरू नभइ एकबिहान खान पकाईरहेको बेला उनलाई स्ट्रोक भएको रहेछ।
मलाई अचम्म लाग्यो। मैले सोधे-"कसरी हुन्छ त यस्तो?"
"डाक्टर ले स्ट्रेसले हो भन्यो।"
मैले फेरी सोधे-"के को स्ट्रेस थियो त त्यसतो?"
उनको जवाफले म हाँसे।
उनले फेरी भनिन-"साँच्चै भन्या। मलाई हरदिन कसरी अँग्रेजी राम्रो बोल्ने होला भनेर यस्तो तनाव हुन्थ्यो कि! अष्ट्रेलियामा जो पनि अँग्रेजी बोल्ने, आफूलाई केहि नआउने!"
मैले भने-"आज एउटा नयाँ कुरा थाहा भयो। अँग्रेजी पनि अपाङ्गता बढाउने एउटा कारण रहेछ।"
मेरो कुराले उनी हाँसिन।
जिवनमा धेरै महत्वाकांक्षा लिएर हिडेकी हेजी एक्कासी अपाङ्ग हुनुपर्दा धेरै कष्ट बेहोर्नु परेछ। ३ वर्ष त उनी बेडमा सुतिरहिन् रे। अष्ट्रेलिया बाट फर्किन्, अपाङ्गताकै कारणले पतिले छोडे, पढाई छुट्यो, साथी छुटे। कति पल्ट त मर्न मन पनि लाग्थ्यो रे तर हात कमजोर भएकाले गर्दा मर्न पनि सकिनन् रे।
हेजीले यस्तो भन्दा मेरो मन भरिएर आयो। म उदास भएको बुझेर उनले भनिन-"हे। चिन्ता नगर। अहिलेको कुरा हैन के यो। अहिले त म बिन्दास भैसके। फेरी पढाई सुरू गरेको छु। काम गर्छु। गाडी चलाउन सक्छु। अर्को महिना फेलोशीपमा अमेरीका जाँदैछु।"
मैले स्थितिलाई हल्का बनाउन भनें-"अमेरीका त झन् अँग्रेजीको खानी नै हो। अब यसपाली तिमीलाई अँग्रेजीले के गर्ने हो!"
उनी पहिला त हाँसिन् अनि भनिन्- "आजकल त मलाई अँग्रेजीसँग खासै डर लाग्दैन। अँग्रेजीले मलाई यस्तो बनायो। तर मैले पनि दिनरात गरेर अँग्रेजी सिकेरै छोडेँ।"
उनको कुरा सुनेर मैले उनलाई "डरके आगे जित हे" भन्ने एडको स्लोगन सुनाएँ। उनी खुब हाँसिन् र मसँग त्यो लाईनलाई हिन्दी बोल्न सिकिन्।
हाम्रो बसयात्रा टुङ्गिने बेला तिर मैले उनलाई सोधे-" साँच्चै हेजीको अर्थ के हो?"
मैले सोधैँ-"छौ त तिमी त्यसतो?"
उनले छैन भन्ने ईशारामा टाउको हल्लाईन् र हाँसिन्।
हेजी सँग छुटिसकेपछि मैले मेरो एकजना कोरियन साथीलाई उनको बारेमा भने। त्यो साथी पनि उनको कथाले खुशी र दुखी दुवै भयो र भन्यो
तिम्रो नयाँ साथीको नाम त "गन्घान" हुनुपर्ने रहेछ।
मैले नबुझेर उतिर हेरेँ। उसले भन्यो-"गन्घान अर्थात बलियो, बहादुर!"
म आज पनि जब हेजीलाई सम्झन्छु मलाई त्यहि शब्दको याद आउँछ- गन्घान।